Nuu fi Isaan (Oromoo fi Koloneeffataa) – Gubirmans Publishing
Roorroo koloneefataa hammaa bahaa kan yaaliin seenaa, aadaa, afaanii fi dudhaa Oromoo balleessuuf godhame dabalatutu qabsoof ummata kakaase. Hardhas yoo tahe waldhaansoon mirgaaf godhamu itt fufaa,sirna Gadaa keessaa akeekota dhimma itt bahuun dandahaman guddifachuun irra ilaalamuu hin qabu.Ijoolleen Oromoo yero qabsoo bilisummaaf ka’an sana,kaayyoon saba saanii akkasumas firaa fi diinni eenyu akka tahan isaaniif taliila ture. Sun sagantaa malbulchaa dhaaba kallacha qabsoo Oromoo tahe, ABO irra kaa’ameera. Baras firaa fi diina gidduu timjii mullatutu ture. Angoon hoggansaas akeekamee ture.Bulee garuu want halle caalaa dimimmisaawaa fi laaqamaa dhufuutt ka’e. Amma firaa fi diinaa gargar baafachuun mamii dha; daangaan angoo fi barri hoggansaa, mirgaa fi dirqammi qondaalotaa fi miseensotaa sadarkaa hin beekamne gahaniiru. Eenyuun “Nuwi”, eenyuun “Isaan” jechuuf qabsaawoti qayabbannoo waloo dhabaa jirruu.Kanaaf dargagggoon hireen ummata kanaa dhimma keenya jedhan keessa deebi’anii mari’achuun yeroo saati.Dur Gadaan tokko yeroo murtaaweef hin dabarsu ture.Gadaa haaraan dhufu seera ofii tumata.Yoo haaraa hin baafnes kan darbe irra deebi’ee akka kan ofiitt tuma.Eenyuu seeraa ol hin turre.Sun akeekaa guddifatamuu qabu.Amma egaa,Gadaan seeraanis aadaanis kan dargaggoo waan taheef dirqammi joonjee qabate keessaa sabicha baasuu kan saaniitii.Kan kana gochuu dandahan qaama yaa’ichaa tahanii qabsoo sabaaf gumaachaa kan jiranii.Akki qabsoon Oromoo battala adda addaatt si’ana itt qabamaa jiru yaaddessaa dha.Kanaaf hundi garaa qulqulluun of qoree yaada furmaataa dhihessuu qaba. Gara kanatt masaka kennuuf hayyooti Oromoo hundi dirqamaa fi abbaawummaa qabu.